Iindaba-ungayifaka njani i-bamboo decking
Umgangatho we-bamboo obizwa ngokuba yi-bamboo flooring. Yenziwe ngemicu yoqalo ekumgangatho ophezulu kwaye icinezelwe ngamawaka aliwaka eetoni zetekhnoloji yoxinzelelo oluphezulu. Ukukhethwa kolu hlobo lwe-bamboo flooring kucoceke ngakumbi kunokomgangatho we-bamboo oqhelekileyo. Luhlobo olutsha lwebhodi eyenziwe ngoqalo, ethatha uqalo njengempahla eluhlaza kwaye iqhutywa ngokwemigaqo yenkqubo yokwenziwa kweenkuni eziphindiweyo. Zine iiprofayili zomhlaba ze-REBO decking decking:
1. MF021 / DF021: uyilo umphezulu tyaba
2. MF121 / DF121: uyilo lomhlaba olunamaza amancinci amancinci
3. MF321 / DF321: uyilo lomhlaba olungamaza amakhulu
4. MF621 / DF621: uyilo lomgangatho omncinci we-groove
Abathengi banokukhetha izimbo abazithandayo.
Ukufakela ngcono ukuhonjiswa ngoqalo ngaphandle, kukho izinto eziyimfuneko:
1. Isihlanganisi:njengesiseko ngaphambi kokufaka umgangatho. Umthi, isinyithi, izinto zoqalo, konke kulungile, nantoni na oyifunayo.
2.Iiklip kunye nezikrufu:izinto steel stainless. Ukulungisa iziqwengana, i-REBO iphakamisa iziqwengana ze-DC05 (umfanekiso wokuqala), yomelele ekubambeni, umsantsa ophakathi kweebhodi ezimbini umalunga ne-6-7mm. Ukujonga iziqwengana, ungasebenzisa iDC06 yethu (umfanekiso wesibini) ukujonga kakuhle ukufakelwa.
3. Umbane wombane
4. Iteyiphu yentsimbi
5. Inqanaba lomoya
6. Irabha hammer
7. Umqhubi we-Screw Driver
1. Ngaphambi kofakelo, nceda ugcine iimveliso kwindawo eyomileyo kunye nomthunzi, thintela ukukhanya kwelanga kunye nemvula.
2. Phambi kofakelo, coca indawo yokusebenzela, qiniseka ukuba isiseko siyicaba kwaye sizinzile, umjelo ugudile kwaye uhambelana neemfuno zoyilo lokwakha.
3. Izidibanisi kufuneka zilungiswe kwiibhloko zesamente ezizinzileyo okanye kwiithayile zesamente. Qinisekisa ukuthambeka kokuthambeka 1-2 degrees ukusuka kwinqanaba ukuze kuphalaze amanzi.
4. Umgama phakathi kwe joists kufuneka ube phakathi kwama-450 ukuya kuma-500mm. Ngomgangatho we-1860mm ubude obudinga i-5 joists.
5.Umgama ukusuka kumgangatho ukuya ezantsi komgangatho kufuneka ubengama-80-150mm.
Nazi iiFildi zokuFakela ukubhekisa:
1. Ukufakwa kwesiseko: iindlela ezimbini zesalathiso sakho
1) Ubuncinci: Iithayile zesamente phantsi kwe joists
2) Ingcali: Sebenzisa ii-joists ezibambeke kabini kwiithayile zesamente kuzinzo lwexesha elide
2. Intloko edibeneyo: I-REBO bamboo decking yenzelwe ngolwimi kunye nentloko ye-groove, ke iibhodi ezimbini zinokudityaniswa kunye ngokulula kakhulu.
3. Indlela yokuFakela ukuSekela: Unokusebenzisa i-DC 06 ukuqala nokuphela. Iibhodi zinokudityaniswa ngokulula kakhulu.
4. Ukuhombisa ngemijelo ehambelanayo kumacala amabini ubude kunokulungiswa kunye neklip DC05 kwiijoists. Umgama phakathi kwebhodi umalunga ne-6-7mm emva kofakelo.
Apha abanye abathengi baya kubhideka malunga nomsantsa phakathi kweebhodi ezimbini. Kutheni kufanele kubekho umsantsa omncinci phakathi kwabo? Njengoko sisazi kuthi, ngenxa yokuhombisa ngaphandle, kuyakubakho ukwanda kunye nenqanaba lokuncipha phantsi kwelanga kunye nemvula, ke kubalulekile ukushiya isikhewu esincinci kwiibhodi ukuze zilungele iimeko zezulu ezahlukeneyo.
Ngolwazi oluthe kratya, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi ~